ABC Ahịa Online
Fraịde, Jenụwarị 14, 2011 Sunday, October 19, 2014 Douglas Karr
Taa, m na-ekwu okwu na ihe omume a na-akpọ Na-achịkwa Ọkara Gị. Ebumnuche nke mmemme a bụ inye ndị ntorobịa azụmaahịa ike ka ha na-ahụ maka azụmaahịa ha. A na-agwakọta ihe omume ahụ na nkuzi ndụ yana netwọkụ azụmaahịa yana omume kacha mma. Dịka ọmụmaatụ ezigbo enyi, Victoria Finch, bụ mpaghara akwụmụgwọ ọkachamara onye kwuru okwu banyere ịghọta otuto kredit gị (nke mara mma) yana otu esi ejikwa ya.
Achọrọ m imeghe anya ndị mmadụ na teknụzụ niile yana ndụmọdụ dị ebe ahụ iji mepee ọnụnọ weebụ. Imirikiti ụlọ ọrụ anaghị eji ọtụtụ ngwaọrụ na nyiwe dị ebe ahụ - ọtụtụ n'ime ha anaghị efu ihe ọ bụla mana oge iji mejuputa ya. Ọ dịkwa mkpa ka ndị mmadụ mata na ọnụọgụ weebụ ha bụ onye na - ere ahịa ahịa maka ha - ịnọ na ebe ha na-enweghị ike ịnọ mgbe ndị mmadụ chọrọ ha.
Enwere ezigbo nloghachi na itinye ego na ịmebe webụ gị ọ bụghị aṅụ. Nke a bụ ABC nke m tinyere (na m ga-ekwu maka oge na-esote:)
Tags: online ọnụnọeme nzuzu
Feb 5, 2011 n’elekere 1:29 nke abali
Chaị. Atụmatụ dị egwu. Anyị bụ ndị mbido na ntanetị na nso nso a anyị na-achọ ndụmọdụ iji nyere anyị aka ịsọ mpi na ụwa nke ịre ahịa / ọnụnọ n'ịntanetị. Imirikiti ihe anyị mejuputara, mana ọ na - enyere aka ịmegharị iwu na isiokwu a. Got nwere onye ọhụụ ọhụụ n’ime anyị n’ezie! Daalụ Maazị Karr!
Feb 10, 2011 na 8:10 PM
Nchịkọta dị mfe maka ndị mbido agbanyeghị ịchefu itinye otu n'ime usoro dị oke mkpa mgbe ị na-emepụta / ịmalite saịtị nke bụ iji hụ na ọ bụ CROSS-BROWSER COMPATIBLE !!! ọtụtụ saịtị na-eyi ihe jọgburu onwe ya mgbe ha anaghị eme nke ọma na ihe nchọgharị ụfọdụ.